ग्यारेरी बैरी र एक रक्षात्मक मिडफिल्डरको रूपमा उनको करियर
खेलकुद र स्वास्थ्य, फुटबल
रक्षात्मक मिडफिल्डर गारथ बैरी मुख्य रूपमा क्लब "एस्टन विला" को लागि आफ्नो प्रदर्शन को लागि जानिन्छ। सबै पछि, यस टोलीको लागि उहाँले 1 997देखि र 2009सम्म खेल्नुभयो। र उनले 12 वर्ष को लागि राष्ट्रीय टीम को सम्मान को बचाव गरे। अनि कप्तानको आर्मब्यान्डको साथ मैदानमा बाहिर गए। उहाँसँग एक रोचक क्यारियर छ, त्यसैले यसको बारेमा कुरा गर्न लायक छ।
"अस्टन विला" र "लिभरपूल" को लागी छोड्ने प्रयास
गेराथ बैरी 1981 मा फेब्रुअरी मा जन्म भएको थियो। 14 वर्षको उमेरदेखि, उनी फुटबलमा संलग्न छन्। उनले ब्राइटन र होभ अल्बियन भनिने क्लबमा सुरू गरे। यसको संरचनामा, 1 995देखि 1 999 सम्म सूचीबद्ध गरिएको थियो। त्यस पछि, उहाँले एस्टन विला र जूनियरको रूपमा जान्नुभयो। 1 99 8 मा खेलाडीको पहिलो म्याच, दोस्रोको दोस्रो। ग्यरेरी बैरीले विश्वव्यापी खेलाडीको रूपमा स्थापित गरेको छ। उहाँ मध्य र बायाँ डिफेंडर हुन सक्नुहुनेछ।
अक्टोबर 28, 2007 मा तिनले आफ्नो खातामा पहिलो रेकर्ड रेकर्ड गरे। त्यसपछि उहाँ अंग्रेजी प्राइमियर लीगको 300 म्याचमा खेल्ने सबैभन्दा सानो खेलाडी बने। त्यस समयमा उहाँ 26 वर्ष हुनुहुन्थ्यो।
2008 मा, "लिवरपूल" ले खेलाडीलाई यसको रचनामा संक्रमणको लागि धेरै प्रस्तावहरू बनायो। र तिनीहरू सबै अस्टन विला द्वारा अस्वीकार गरिए। यो ग्यारेरी बैरीले धेरै गुमाएको थियो। त्यसपछि फुटबलले सार्वजनिक रूपमा मार्टिन ओइलिलको आलोचना गरे। उनले आरोप लगाए कि क्लब मा जानबूझकर प्रतिधारण को। आखिर, गेरैथ, वास्तवमा, लेभपोलमा च्याम्पियन लीगमा खेल्न प्रवेश गर्न चाहन्थे। "लिभरपूल" ले अर्को प्रस्ताव गरे, प्रति प्लेयर 15 मिलियन पाउण्डको मूल्य देखाउँछन्। तर Aston विला को व्यवस्थापन 18 मिलियन चाहन्थे। परिणामस्वरूप, गेराथ क्लबको कप्तानको उपाधिबाट हटाइएको थियो, उनलाई दुई हप्तासम्म वेतन बिना छोडेर टोलीले केहि समयसम्म प्रशिक्षित गर्ने अधिकार अस्वीकार गर्यो।
"एस्टन विला" पछि कैरियर
सन् 2009मा ग्यरेरी बैरी क्लब म्यान्चेस्टर सिटीबाट खरिद गरियो। र टोलीले 18 मिलियन नगद भुक्तानी गरेन जुन "लिभरपूल" बाट "विला" द्वारा आवश्यक थियो, तर केवल 12। यो सम्झौता5वर्षको लागी समाप्ति भयो। "एस्टन विला" को प्रशंसक यस टीम को लागि खेल को गीथ को निर्णय संग धेरै दुखी थियो। तर तिनले वास्तवमा अर्को चार वर्षको लागि यस क्लबको रंगलाई बचाए। मैले 132 खेल खेलेँ र6गोल गरे। यस टीमको साथ उनी इङ्गल्याण्डको चैंपियन बने र देशको कप पनि जिते।
तथापि, 2013 मा तिनले एफसी एभरटन भागे। पट्टिको समयमा उनले 32 म्याच खेलेका थिए र तीन गोल गरे। सिजनको अन्त्य पछि, एभरटनको नेतृत्वले खेलाडीलाई छुट्याउने निर्णय गर्यो। र उहाँ "स्काउट्स" को दायरामा अझै पनि हुनुहुन्छ।
गेरथ बैरी नेशनल टीम को सबै टीमहरु को लागि खेले। 16 र 18 वर्ष सम्म, 21 वर्ष सम्म र निस्सन्देह, मुख्य टोलीको लागि। अन्तिमको लागि उहाँले 2000 देखि 2012-वें सम्म प्रदर्शन गर्नुभयो। मैले 53 खेल खेल्दै र3गोल बनाए। यो पनि रोचक छ कि त्यो 18 बर्ष भन्दा अघि टोलीको पूर्व-कप्तान थियो।
उपलब्धिहरु को, माथि को बावजूद, उनको एक अन्य कप इंग्लैंड छ। उनले Intertoto को मुख्य ट्रफी पनि जीता।
तिम्रो व्यक्तिगत जीवनको बारेमा के हो? 2007 मा, बैरी विवाहित। उहाँको चुनेको एक बचपन मित्र हो। उनको नाम लुइस हो। विवाह गर्नुभन्दा चाँडै दम्पती जन्मिएपछि अस्कर र छोरीलाई फ्रि जन्मियो।
दिलचस्प छ, गीथको सबैभन्दा राम्रो साथी माइकल स्टेन्डिङ हो। तिनीहरूले "Aston विला" को लागि एक साथ खेले। यो टिप्पणिहरु लायक छ कि उनि एक नै दिन मा यस क्लब मा गए। दस वर्षका एक परिचित फुटबल खेलाडीहरू। माइकल पनि गैरेथ को एक एजेन्ट हो। बैरी उसलाई 2009 मा नियुक्त गरे, जब उनले एलेक्स ब्ल्याक संग सहयोग गरे।
डच कोच ब्लिन्ड डैनी
डैनियल स्ट्रिज: क्यारियर, उपलब्धिहरू, रोचक तथ्यहरू
स्पेनी डिफेंडर डेनियल कार्वावल
रुडी फेलर: छोटो जीवनी
फुटबलर विचेश्वला करवाव। वाइसस्लाव करवयेवको व्यावसायिक विकास
Gianluigi Buffon - गोलकीपर, जसको नाम सदाको लागि इटाली फुटबलको इतिहासमा रहनेछ
को मध्ययुगीन मा पूर्व Turkistan
कसरी र के राम्रो भान्सा लागि हुड किन्न: समीक्षा, मोडेल, निर्माता र विनिर्देशों
कसरी "Maynkraft" मा एक पत्थर बनाउन बारेमा विवरण
Bradycardia। उपचार वर्गीकरण आधारमा
रूसी शहर को पर्यावरण दर्जा। शहरी पारिस्थितिकीय समस्याहरू
वजन खोने सुरु गर्न म कसरी लामो हरेक दिन जानु पर्छ?
BAKLAVA टर्की लागि क्लासिक नुस्खा
कावीयार संग सलाद
शरीरको स्पर्श। यो के हो?
Shon लेवी: सिनेमा (सूची)
SMD-प्रतिरोधों: वर्णन, लेबलिंग